XOG: AC Milan & Leonardo Bonucci waxaa kala xigta €10m oo euro oo qura – Gool FM
(Milano) 13 Luulyo 2017 – AC Milan ayaa la sheegayaa inay €10m oo euro uun u jirto inay soo qaadato daafaca khabiirka ah ee Juventus ee Leonardo Bonucci, iyadoo Mattia De Sciglio laga reebay qorshahan.
Sida ku qoran Sport Mediaset, Milan ayaa miiska saartay mushahar dhan €7m oo euro oo ay sanadkii siinayso Bonucci iyadoo Juve u bandhigtay dalab dhan €30m iyo De Sciglio oo ay siinayso Juve.
Yeelkeede, waxay wararku sheegayaan inay Bianconeri dalbanayso €40m taasoo De Sciglio ka saaraysa heshiiska, waloow uu aad u jeclaan lahaa inuu ku biiro macallinkiisii hore ee Max Alllegri oo haatan Juve layliya.
Waloow uu La Stampa horay u sheegay inuu heshiisku isla caawaba dhamaan karo, Mediaset ayaa rumaysan in labada naadi ay rajaynayaan inay heshiiska soo afjaraan “2-3 maalmood gudohood”.
Juve ayaa iyadna durba ka fikiraysa qofkii u bedeli lahaa Bonucci oo u muuqda nin ka xirxiran Old Lady iyadoo durba la sheegayo inay xaaskiisu guri ka raadinayso Milano, Mediaset ayaa sheegaysa in Mattia Caldara oo 23-jir ihi uu yahay qorshe 2-aad ama ‘Plan B’.
Taageerayaasha Juve ayaa iyaguna la arkayay iyagoo ku boorrinaya Bonucci inuu sii joogo Bianconeri iyagoo ka heesayay bannaanka garoonka tababarka Juve ee Vinovo.
GOOGOOSKA: Arsenal vs Sydney 0-2